Window Registry အကြောင်း ( မြန်မာ)
window registry အကြောင်းကို အသေးစိတ် ရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ . အားလုံးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ် . စာအုပ်လေးကလဲ ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . တစ်ခုအဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ခုနဲ့ download လုပ်လိုက်ပါ .
www.mirrorcreator.com ကို bagan က ban ထားတယ်ထင်တယ် . အဲ့ဒီ့လူများအတွက် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ.
Download mediafire | Download ifile.it | Download filefactory | Download zshare | Download rapidshre | Download ziddu